Faahfaahin: Qarax Dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Faahfaahin: Qarax Dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Faahfaahin: Qarax Dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax dhowr qof ku dhinteen oo maanta ka dhacay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka la geliyey ayaa haleeshay nooca NISSAN SURF ah, waxaana la xaqiijiyey inay ku dhinteen ilaa saddex qof, iyadoo qaraxu ahaa mid xoog leh oo gaariga burburiyey.
Qasaare kale oo dhaawacyo ah ayaa la sheegay inuu geystay Qaraxa, iyadoo la sheegay inay haweeney ku dhaawacnay qaraxa miinada ee qabsaday Gaariga.
Dadka dhintay ayaa dhammaantood saarnaa Gaariga qaraxu qabsaday, waxaan goobta gaaray ciidamada amniga oo qaaday meydadkii dadkii dhintay iyo dhaawaca.
Previous articleFarmaajo oo bilaabay inuu Villa Somaliya ku casuumo Qeybaha Bulshada ee Magaalada Muqdisho
Next articleHaweeney Afrikaan ah oo mar qura dhashay 9 Caruur ah (Laba ka mid oo Qalab lagu arki waayey)